Faahfaahinta weerarada caawa iyo Muqdisho.
Kooxaha la magax baxay wax iska caabinta Somalia ayaa caawa weerar culus ku qaaday saldhiga Galbeed ee degmada Wadajir, halkaasoo ciidamada booliska DF ay joogeen.
Kooxahaan ayaa weerarkaan gaadmada ah caawa qaaday labadii fiidnimo xiliga Muqdisho iyadoo ciidamada booliska Dowlada KMG ah ee Somalia ay fureen rasaas aan loo meel dayin.
Iska horimaadkaan ayaa waxa uu ahaa mid xoogan, iyadoo la maqlay qaraxyo dhowr ah oo loo maleynayo in ay yihiin baasuukayaal, laakiin guddoomiyaha degmada Wadajir waxa uu sheegay in ciidamada booliska ay iska caabiyeen isla markaana aanu jirin wax qasaaro ah oo ka soo gaaray ciidamada dowladda weerarkaasi.
Ilaa hada lama oga qasaaraha labada dhinac soo kala gaaray, iyadoo ciidamada booliskana ay bilaabeen inay baaritaano ka sameeyaan xaafadaha u dhow dhow saldhig galbeed.
Si kastaba, weerarada lala beegsanayo xiliga habeenkii ciidamada DF iyo kuwa Itoobiyaanka ayaa caado ka noqday caasimada Somalia ee Muqdisho.
Weeraradii Habeenkii Jimcadu soo geleysey iyo Muqdisho.
Xaruntii hore ee Guulwadayaasha ayaa xalay kooxo hubeysan waxa ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan Dowlada KMG ah ee Somalia oo halkaasi fariisin adag ku lahaa.
Labo qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyay inay weerarkaasi ku geeriyoodeen, halka warar kalana ay sheegayaan in ciidamada qaarkood dhaawacyo cul culus ay kasoo gaareen weerarkaasi gaadmada ahaa ee xalay lagu soo qaaday.
Kooxaha hubeysan ayaa la cadeeyay inay baasuukayaal iyo bambooyin ku garaaceen xaruntaasi, iyadoo ciidamada Dowlada KMG ah ee halkaasi joogay la sheegay inay kala firxadeen.
Ciidamada ayaa xalay galay xarunta Gaashaandhiga oo ay degan yihiin ciidamada Ethiopian-ka, kadib markii kooxda weerarka soo qaaday ay xoog ku maquuniyeen.
Iska horimaadkii xalay dhacay oo ahaa mid culus ayaa markii uu muddo socday waxaa ku soo biirey ciidamo Ethiopian ah oo fariisin ku leh dhismaha wasaaraddii Gaashaandhiga, kuwaasi oo meelaha qaar gudaha u soo galay xaafadaha dadka rayidka ah ay dagan yihiin.
Ciidamada Ethiopian-ka ayaa la xaqiijiyay inay dad iskugu jira Odoyaal iyo Dhalinyaro ka wateen xaafadaha u dhow dhowaa goobta uu falka ka dhacay, iyadoo aan ilaa iminka la sheegin halka la geeyay dadkaasi ay qabteen ciidamada Itoobiyaanka.
Si kastaba ha ahaatee, weerarada lala beegsanayo ciidamada Dowlada KMG ah ee Somalia ayaa maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho silsilad ka noqday, iyadoo weeraradii ugu dambeeyay ay ku dhinteeyn ugu yaraan 10 Askari sida la qiyaasay.
Madaxweynayaasha Somalia iyo Kenya oo kulan yeeshay.
Madaxweynaha Dowlada KMG ah ee Somalia Cabdulaahi Yuusuf Axmed ayaa maanta kulan aan caadi aheyn la yeeshay dhigiisa dalka Kenya Mwai Kibaki.
Labada mas�uul ayaa manta ku kulmay caasimada dalka Kenya ee Nairobi iyagoo ka wada hadlay xaalada kacsan ee ka taagan caasimada Somalia ee Muqdisho, iyo sidii Kenya ay qeyb ugu qaadan laheyd dhameynta xiisadaha ka aloosan guud ahaan Somalia.
Mwai Kibaki ayaa lagu soo waramayaa inuu balan qaaday in markasta dowladiisa ay taageero la garab taagan yahay xukuumada Cabdulaahi Yuusuf.
Madaxweynaha Dowlada KMG ah ee Somalia Cabdulaahi Yuusuf Axmed ayaa dhigiisa Kenya ugu warbixiyay qaabka uu u socdo shirka dib u heshiisinta beelaha Somalia, isagoo sheegay in dhibaato badan kadib dowladiisa ay ku guuleysatay in shirka uu qeybtiisa labaad usoo gudbo.
Cabdilaahi Yuusuf ayaa sheegay in wejiga koowaad ee shirkaasi oo lagu guulestay, diirada lagu saaray xalinta khilaafaadka beelaha, nabada iyo hubka dhigista.
Madaxweynaha Somalia waxa uu intaa ku daray in wejiga labaad ee shirka, oo mar hore bilowday, looga hadli doono dib u dhiska qaranka iyo arrimaha siyaasada, waxaana ka mida buu yiri dowlad-wanaag, qeybsiga qeyraadka dalka iyo awood wadaagida, sida uu qabo axdiga KMG.
Waxa uu sheegay in wejiga labaad ee shirka looga hadli doono sidoo kale dhibaatada burcad badeeda, daryeelak qaxootiga iyo dadka ku barakacay gudaha dalka.
Isku soo duuboo, kulanla labadaan mas�uul ayaa kusoo aadayaa xili xaalada Muqdisho ay aad u kacsan tahay isla markaana ay maalin iyo habeen ay ka dhacaan qaraxyo dowlada lagaga soo horjeedo.